Aluminium jumlada elektarooniga ah ee alaabada aluminium lagu iibiyo oo jaban Ouzhan
Daawaha Aluminiumku waa kan ugu caansan ee loo isticmaalo qalabka birta aan birta ahayn ee warshadaha, waxaana si weyn loogu isticmaalay duulista hawada, aerospace, baabuur, soo saarista mashiinada, dhisida maraakiibta iyo warshadaha kiimikada. Daawaha aluminiumku waa la kori karaa.
Qalabka aluminium ee aluminium koronto ku shaqeeya
Electroplating wuxuu u qaybsan yahay dahaadhida xajinta, dahaadhka foosto, dahaadhka joogtada ah iyo xoqida burushka, kuwaas oo inta badan la xidhiidha cabirka iyo dufcadda qaybaha la dahaadhayo. Dahaarka Rack ayaa ku habboon alaabooyinka cabbirka guud, sida bambooleyda baabuurta, mashiinnada bajaajleyda, iwm. Dahaadhida foosto waxay ku habboon tahay qaybo yaryar, dhejiyeyaasha, dhaqayaasha, biinanka, iwm. Dahaarka burushku wuxuu ku habboon yahay qayb ama dayactir.
Xalka elektaroonigga waxaa ka mid ah aashitada, alkalinka, iyo xalalka aashitada iyo dhexdhexaadka ah ee isku jira chromium. Si kasta oo loo isticmaalo habka dahaadhaynta, taangiyada dahaarka leh iyo laalaadayaasha la xidhiidha alaabooyinka la xoqayo iyo xalka dahaadhku waa inuu lahaadaa heer gaar ah oo loo yaqaan 'Versatility'.
Ouzhan daawaha aluminium electroplating daahan nickel daahan:
Mabda'a aluminium daahan daahan
Electroplating waxay u baahan tahay tamar-hooseysa-tamar sare oo koronto siisa haanta korantada iyo qalab elektrotiktik ah oo ka kooban xalka electroplating, qaybaha la dahaadhayo (cathode) iyo anode. Waxyaabaha ay ka kooban tahay xalka electroplating waxay ku kala duwan yihiin hadba lakabka dahaadhka, laakiin dhammaantood waxay ka kooban yihiin milix weyn oo bixisa ions bir ah, wakiil isku murugsan oo isku dari kara ion biraha cusbada ugu weyn si ay u sameyso kakan, keyd loo adeegsado xasilinta PH of xalka, firfircoonida anode, iyo waxyaabaha lagu daro gaarka ah.
Nidaamka korantada ayaa ah geedi socod ay ionka biraha ee xalka goynta loo yareeyay atamka birta iyada oo loo marayo falcelinta korantada iyadoo la raacayo ficilka aaladda korantada ee dibedda, birtana lagu shubo cathode. Sidaa darteed, tani waa geedi socod koronto oo bir ah oo ay kujirto wareejinta wejiga dareeraha, falcelinta elektaroolka iyo koronto dhalinta.
Taangiga dahaadhka leh ee ku jira xalka korantada, qaybaha la nadiifiyay iyo kuwa sida gaarka ah loo sii daayay ee la marinayo waxaa loo isticmaalaa sidii cathode, anode-na waxaa laga sameeyaa bir bir ah, labada cirifna waxay u kala horreeyaan isku xirnaanta koronto-wanaaga iyo taban ee awoodda DC sahay. Xalka korantada wuxuu ka kooban yahay xal biyo ah oo ka kooban iskudhaf bir-dahaadhan, milix cusbooneysiin, kaydiyayaal, hagaajiyeyaasha pH, iyo waxyaabo lagu daro.
Ka dib markii tamarta la helay, ion-ka biraha ee xalka electroplating waxay u dhaqaaqaan cathode iyadoo ay hoos imaanayaan ficil ahaan kala duwanaanshaha suurtagalka ah si loo sameeyo lakab dahaadh ah. Birta anode waxay sameysataa ion biro xalka electroplating si ay u ilaaliso isku soo ururinta ions birta ah si loo miiro. Xaaladaha qaarkood, sida dahaadhka chromium, anode aan kala maarmi karin oo ka samaysan macdanta "lead" iyo "lead-antimony alloy" ayaa la isticmaalaa, taas oo kaliya u adeegta gudbinta elektaroonigyada iyo qabashada hadda.
Ku soo ururinta ion chromium-ka ee elektroolka ayaa u baahan in la ilaaliyo iyadoo si joogto ah loogu daro xeryahooda chromium-ka xalka dahaadhka. Inta lagu jiro korantada, tayada qalabka anode, halabuurka xalka elektaroonigga, heerkulka, cufnaanta hadda jirta, waqtiga korantada, kicinta xooga, wasakhda firidhsan, awoodda mowjadda, iwm waxay saamayn ku yeelan doontaa tayada dusha sare waxayna u baahan tahay in la xakameeyo xilli ku habboon.
Xilliga la dooranayo, jaantuska la xoqayo waxaa loo isticmaalaa sidii cathode, isla birta birta ah waxaa loo istcimaalaa anode (anode aan kala maarmi karin ayaa sidoo kale la isticmaalaa), iyo elektroolka waa xalka ay ku jiraan ions birta la malaasay; xoogaa go'an waa ka-soo-gal u dhexeeya anode iyo cathode.
Isticmaalka Aerospace, dhismaha maraakiibta, dhismaha, hiitarka, gaadiidka, farsamaynta qalabka farsamada, qalabka caafimaadka iyo baahiyaha maalinlaha ah
Hore: Sawiridda qaybaha aluminium ee alwaaxda laga soo saaray
Xiga: Aluminium la safeeyey albaabka aluminium iyo qaybo ka baaraandegidda daaqadda